Shineon voafantina ho toy ny mena top100 eran-tany eran-tany
SANTA MONICA, Calif. — DATE — Red Herring dia nanambara ny Top 100 Global ho fankasitrahana ireo orinasam-panjakana tsy miankina avy any Amerika Avaratra, Eoropa ary Azia androany, nankalaza ireo fanavaozana sy haitao ananan'ireo startup ireo amin'ny indostrian'ny tsirairay avy.
Nahazo loka tamin'ny orinasa teknolojia avo lenta i Shineon.
Ny marainan'ny 16 martsa, ny Konferansa momba ny asa ara-toekarena sy teknolojia 2019 dia notontosain'ny Nanchang High-tech Zone Administration tao amin'ny efitrano malalaky ny sampana teknolojia ambaratonga faharoa faha-28 ao Nanchang. Tanjona ny kaonferansa handinihana feno sy hamaranana ny ...
Fanomezana 100 cleantech manerantany 2011
Mba hahafeno fepetra amin'ny Global Cleantech 100, ny orinasa dia tsy maintsy mahaleo tena, mitady tombony ary tsy voatanisa amin'ny fifanakalozana stock stock. Tamin'ity taona ity, orinasa 8 125 avy amin'ny firenena 80 no voatendry, Shineon dia iray amin'izany. Ny fizotry ny fisafidianana dia manambatra ny angon-drakitra fikarohana an'ny Cleantech Group miaraka amin'ny fitsarana mendrika avy amin'ny fanendrena ...